Gogoldhiga Kulanka Xiisaha Leh Ee Horyaalka Premier League Ee Kooxaha Arsenal v Southampton. - jornalizem
Gogoldhiga Kulanka Xiisaha Leh Ee Horyaalka Premier League Ee Kooxaha Arsenal v Southampton.
Kulanka: Arsenal v Southampton
Waqtiga: 5ta galabnimo xilliga Soomaaliya
Schneiderlin, S. Davis, Ward-Prowse�Puncheon,Lambert, Lallana
Arsene Wenger ayaa sugaya taam ahaanshaha ciyaartoy dhowr ah oo muhim ah ka hor kulanka ay maanta la leeyihiin kooxda Southampton.
Theo Walcott oo la sheegay inuu soo wajahay virus ayay u badan tahay inuu bedeli doono Alex Oxlade-Chamberlain halka ciyaaryahanka khadka dhexe Abou Diaby, kaasoo ku soo dhaawacmay ciyaarihii caalamiga uu isna shaki ku jiro ka dib markii tababaraha Faransiiska Didier Deschamps uu sheegay inay tahay 50-50 inuu taam noqdo waqtiga loo baahan yahay ka dib markii dhaawac yar uu ka soo gaaray muruqa.
Wojciech Szczesny ayay u badan tahay inuu bedeli doono goolhayaha Talyaaniga Vito Mannone ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawac, lakiin ninka ay isku wadanka yihiin Lukasz Fabianski ayaa isagana ku maqnaan doona dhaawac garabka ah.
Koox martida ah, ciyaaryahanka lacagta rikoorka ah ay ku soo iibsatay Gaston Ramirez ayaa wax walba loo soo dhameeyay inuu si rasmi ah kooxda uga mid noqdo ka dib markii ay soo baxeen arimo heer caalami, lakiin waxaa laga yaabaa inuu kursiga keydka ku soo bilowdo.
Arsenal ayaa dhaliyay kaliya labo gool seddex kulan oo ay ciyaareen Premier League xilli ciyaareedkan, taasoo ah tiro la mid ah goolashii ay dhaliyeen seddexdii kulan ee ugu horeysay xilli ciyaareedkii hore.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka Lukas Podolski oo Arsenal kaga soo biiray xagaagii FC Koln ayaa xulkiisa qaranka u saftay 100 kulan kulankii Denmark ee Euro 2012 isagoo jira kaliya 27 sanno.
Gunners ayaa barbaro gashay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay minankooda ku ciyaaraan Premier League. Si kastaba, waxa ay shabaqa ilaashadeen seddexdii kulan ee ay ilaa iyo haatan ciyaareen xilli ciyaareedkan.
Arsenal ayaa ku dhameysatay ugu yaraan kaalinta afaraad xilli ciyaareed kasta tan iyo 1996-97, waxaana ay Premier League ku guuleysteen seddex jeer intii uu macalin u ahaa Arsene Wenger.
Southampton ayaan weli wax dhibic ah ka helin xilli ciyaareedkan Premier League, inkastoo labo ka mid ah seddexdii kulan ee ay ciyaareen ay hogaanka ciyaarta qabanayeen.
Inkastoo ay ugu hooseeyeen kala sareynta Premier League, Southampton ayaa dhaliyay labo jeer in ka badan goolasha ay dhalisay Arsenal xilli ciyaareedkan iyagoo dhaliyay afar gool.